सनसिटीभित्रका ५ सय १० परिवार त्रासमा, संक्रमितमा थिएन लक्षण ! «
सनसिटीभित्रका ५ सय १० परिवार त्रासमा, संक्रमितमा थिएन लक्षण !
Published : 15 April, 2020 6:57 pm
पेप्सीकोला–टाउनप्लानिङमा रहेको सनसिटी अपार्टमेन्टमा एकै परिवारका दुई जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि अपर्टामेन्टभित्र त्राश छाएको छ । त्यहाँ बस्ने ५ सय १० परिवारका करिब १५ सय जना अहिले कडा क्वारेन्टाइनमा छन् । अपार्टमेन्ट वरिपरीका बासिन्दा पनि घरबाट बाहिर निस्केका छैनन् । गत ५ गते बेलायतबाट नेपाल आएका आमा, छोरा र बुहारी यस अपार्टमेन्टको ‘ए’ ब्लकको १४ औं तल्लामा बस्दै आएका थिए । आमा ८१ वर्षीया, छोरा ५८ वर्षीय र बुहारी ५२ वर्षिया हुन् । उनीहरुमध्ये आमा र छोरामा कोभिड–१९ पुष्टि भएको छ । र्‍यापिड टेस्टमा बुहारीमा पनि पोजिटिभ देखाएको थियो तर, टेकु प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर टेस्टमा नेगेटिभ देखियो ।
अपार्टमेन्टमा ५ वटा ब्लकहरू रहेका छन् । संक्रमितहरु बस्ने ब्लकमा करिब एक सय परिवार बस्छन् । एउटा फ्ल्याटमा ६ वटा परिवार बस्छन् । ब्लकका सबैले साझा लिफ्ट प्रयोग गर्छन् । संक्रमित परिवार पछिल्ला दिनमा तल कम्पाउन्डमा ओर्लनुका साथै विभिन्न कामले गेटबाट बाहिर पनि निस्किने गरेको ‘ए’ ब्लकमै बस्ने एक महिलाले बताइन् । परिवारसँग एउटा कुकुर पनि थियो । परिवारका व्यक्तिहरुले कुकुर लिएर तल कम्पाउन्डमा डुलाउने पनि गर्थे ।